Ogaden News Agency (ONA) – Nuxurka wareysigii Gudoomiyaha JWXO
Nuxurka wareysigii Gudoomiyaha JWXO
Posted by ONA Admin	/ May 9, 2011
Sidaan la socono waxay gumaysiga iyo kuwa uu adeegsado bilaabeen waayadan dambe mashaariic brobagaanda ah oo midabyo badan leh hadafka laga leeyahayna uu yahay in marka hore lagu kala abuuro shaki shacabka halgamaya iyo hogaankiisa, ka dibna laga dhaadhiciyo shacabka inaysan guul ku gaareynin halgankii ay taageerayeen maadaama uu hogaankii halganka ka leexday hadafkii lagu heshiiyay.
Wareysigii ugu dambeeyay ee barnaamijka Ileys ee Somali Chanell uu la yeeshay gudoomiayaha JWXO Adm. Maxamad C. Cismaan oo lagu weydiiyay dhamaan dareenka shacabka ee ku aadan isbadalada ku soo cusboonaaday halganka iyo waxyaabo ka dhashay dacaayadahii ay fidinayeen gumaysiga iyo adeegayaashiisa wuxuuna daaha ka rogay gudoomiyaha mawqifka dhabta ah ee halganka shacabka S.Ogadenya uu hiigsanayo, isagoo hoosta ka xariiqay in hadafkii uu shacabka S.Ogadenya iyo hogaanka JWXO ay ku heshiiyeen aan marnaba laga leexanaynin iyadoo wax ka sokeeya inay Itobiya u ogolaato shacabkanaga Aaya-ka-tashigiisa aanay JWXO diyaar u ahayn inay kula gasho Itobiya heshiis taasoo uu sheegay gudoomiyaha inay Itobiya ku qasban tahay muddo kasta oy qaadato.
Wuxuu gudoomiyaha sheegay oo dhab ah in halganka JWXO uusan ahayn mid ay JWXO bilowdaye uu yahay halgan la’iska dhaxlayay oo siduu ku tilmaamay gudoomiyaha ah – qori isku-dhiib ahaa– taasoo macnaheedu yahay qofkii u haysta in JWXO haddii ay ka soki dhacdo hadafkii uu shacabka hiigsanayay inay qadiyadda Ogadenya halkaa ku dhamaani inuusan taariikhda si fiican u akhrisan. Sidaa darteed maslaxadda shucuubta Geeska Afrika waxay ku jirtaa in qadiyaddan si geesnima leh looga wada hadlo oo shacabka Ogadenya loo ogolaado inuu aayihiisa si xor ah uga tashado.
Wuxuu gudoomiyaha si qota dheer uga faalooday guuldarada haysata gumaysiga oo sida uu sheegay ka muuqata adeegsiga uu adeegsanayo dadkii shacabka ahaa oo dagaalka lagu qasbayo inay galaan. Taasi taariikh ahaan macnaheedu waa inuu ciidankii rasmiga ahaa ee gumaysiga ku guuldareysteen goobaha dagaalka, mooraalkoodana uu aad u hooseeyo. Ciidanka maleesiyaadka ah ee loo yaqaano Hawaarin ayaa markii hore loogu talagalay in laga horgeeyo naftood-hurayaasha JWXO hasa ahaatee markii ay wax guul ah ka keeni waayeen meeshii uu ciidankii rasmiga ahaa ee dawladda ku jabeen ayay hadda dib ugu soo noqdeen dhibaataynta shacabka gaar ahaan dumarka iyo waayeelka iyagoo ku dilaya soo celiya wiilashiina.
Wuxuu gudoomiyaha si faafaahsan uga xogwaramay inaysan JWXO colaad u qabin shaqaalaha ay dawladda Itobiya ka qoratay Ogadenya ee fulinaya hawlaha madaniga ah. si kasta been haloo sheego, hadafka JWXO ma ahayn mana noqonayo in dadka shacabka ah loo dhibaateeyo gumaysiga ayuu mushahar ka qaataa. Waxaa la wada ogsoonyahay in dad shaqaale ah oo macalimiin dugsi ama shaqaale caafimaad ah inta loo soo dhiibo qoryo aan rasaas badan ku jirin dagaalada loo soo diro iyadoo gadaal laga taagan yahay oo midkii aan xabadda ku ridin dhabarka laga toogtay. Gudoomiyuhu wuxuu diirka ka qaaday hadal nuxurkiisu yahay in CWXO ay yihiin ciidan disibiliin fiican leh oo aan laga yaabin inay xabad ku ridaan qof shacab ah oo aan ama dagaal ku soo qaadin ama aan dambi maxkamad ku cadeysay ka galin shacabka.
Arimaha kalee wax laga weydiiyay gudoomiyaha ururka waxaa ka mid ahaa iskaashiga ka dhexeeya mucaaradka Itobiya iyo ururka JWXO. Shucuubta ku dhaqan qabtolka loo yaqaano Itobiya waxaa wada haysta xukun macangag ah oo kalitalis ah oo dhamaan xuquuqdii aadminimo ee shucuubtaa ku tuntay. Waxaa ka mid ah cahdiga Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya in shucuubta Geeska Afrika la’iska kaashado wixii dan u ah ee aan ka horimaanaynin mabaadiida ururka iyo himilada shacabka S.Ogadenya. Haddii qawmiyadaha ku nool Itobiya ay ugu muuqato in la’iska kaashado dulmiga Wayanaaha, JWXO way soo dhaweynaysaa waxayna ka noqonaysaa hormuud, iyadoo qawmiyad walba ay xaq u leedahay danaheeda danaheeda gaar ah in aan lagu faragalin. Hadafka laga leeyahay iskaashiga ka dhexeeya qawmiyadaha Geeska Afrika waa inay timaado fikradda ah in lagu wada noolaado xoriyad iyo cadaalad iyadoo qowmiyadna aanay qawmiyada kale gumaysanin.
Wuxuu kaloo gudoomiyaha hoosta ka xariiqay inaysan JWXO arimaha Somaliya iyo dagaalada sokeeye ee ka dhex socda qabaa’ilka Somaliyeed aanay waligeed faraha la galin inkastoo sida uu sheegay gudoomiyaha dhibaatooyin badan ay maamulada ka jira gobolada qaarkood ay u gaysteen shacabka S.Ogadenya. Hasa ahaatee wuxuu kala saaray gudoomiyaha shacabka Somaaliyeed oo dhamaantood taageersan qadiyadda ay JWXO u halgamayso iyo maamulada ka jira Somaliya oo uu ku tilmaamay in aanay waxba dhaamin maamulka Cabdi iley.
Ugu dambayntii wuxuu gudoomiyaha ka codsaday shacabka S.Ogadenya inay midnimada ilaaliyaan kana feejignaadaan shirqoolada cadawga uu daadinayo gude iyo dibadba, taasoo uu sheegay inuu ilaa waqtigan xaadirka uu ku guuldareystay cadawga talaabooyinkii uu qaaday gude iyo dibadba. Wuxuu gudoomiayah sheegay in aanay JWXO ka bixin kana bixi doonin balantii ahayd in Aaya-Ka-Tashiga shacabkeena uu yahay muqadas aan marnaba gorgortan gali karin. Maamulka Itobiya ka jira haduu diyaar u yahay wadahadal aan shuruud ku xidhnayn oo meel fagaara ah lagu wadahadlo oo daraf saddexaad uu fadhiyo, wuxuu sheegay gudoomiyaha inay JWXO diyaar u tahay soona dhawynayso. Hasa ahaatee in aanay JWXO ogolaanayn beenta Itobiya ee ah in meel qarsoodi ah lagu wadahadlo ka dibna ay Itobiya u adeegsato brobagaanda iyo dacaayad.
Mawqifka JWXO waa middaa uu gudoomiyaha daaha ka rogay, waxaanan ugu baaqaynaa shacabka S.Ogadenya inay fahmaan kana feejignaadaan dacaayadda gumaysiga iyo beenta kolba loo soo dhiibayo gumaysi kalkaalka.
Ogaden Ogaden dhalay says:
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Admiral Mohamed Omar cismaan , waxaana lee yahay marsiirka umadu waa >>>>>>in aanay JWXO ka bixin kana bixi doonin balantii ahayd in Aaya-Ka-Tashiga shacabkeena uu yahay muqadas aan marnaba gorgortan gali karin>>><<<<< Lax walba shilalka ay is dhigto aya lagu qalaa.
waan u mahadcelinayaa madaxwaynaha jamuuriyada ogadenya